रुकुम पूर्वमा टर्कीबाट आइपुग्यो ओखरका बिरुवा | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
फागुन २३, २०७७ आइतबार १८:३१:४८ | राजु लामिछाने
रुकुम पूर्व – लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा टर्कीबाट ओखरका बिरुवा ल्याइएको छ । प्रशस्त मात्रामा हाडे ओखर पाइने यस जिल्लाका किसान उन्नत जातको अर्थात् दाँते ओखरको खेतीतर्फ आकर्षित भएपछि टर्कीबाट १९ हजार दाँते ओखरका कलमी बिरुवा ल्याइएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाइ रुकुम पूर्वले सञ्चालन गरेको ओखर जोन कार्यक्रमअन्तर्गत ओखरका बिरुवा खरिद गरेर ल्याइएको हो । परियोजनाका कार्यालय प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले क्षेत्रगत आधारमा दुई जातका ओखरको बिरुवा ल्याएको बताउनुभयो ।
रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकासँगै सिस्ने र भूमे गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रका लागि फर्नर जातको पोथी र फर्नेट जातको भाले बिरुवा ल्याइएको प्रमुख डाक्टर चौबेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाको तल्लो भेगका लागि भने चेन्डलर जातको पोथी र फ्यांकीवट जातको भाले बिरुवा ल्याइएको छ । यस वर्ष ल्याइएका यिनै बिरुवाले आठ÷दश वर्षपछि मातृ बिरुवाको रूपमा काम गर्ने डा. चौबेले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसपछि बाहिरी देशबाट बिरुवा आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
किसानलाई अनुदानमा वितरण
किसानको मागका आधारमा टर्कीबाट आयात गरिएका ओखरको बिरुवा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ । टर्कीबाट बिरुवा खरिद गरेर ल्याउँदा प्रति बिरुवा चार सय ५० रुपैयाँ पर्न गएकाले कृषकलाई भने प्रति बिरुवा दुई सय २५ रुपैयाँमात्र पर्नेछ ।
जिल्लामा रहेका तीन गाउँपालिकामध्ये सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ बाहेक अन्य ३० वटै वडामा ओखर जोन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । ओखर पाइने सम्भावित सबै क्षेत्रका किसानलाई मागका आधारमा दाँते ओखरको कलमी बिरुवा वितरण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अहिले परियोजनाअन्तर्गत क्षेत्र विस्तार र चक्लाबन्दीको कार्यक्रम भइरहको छ ।
सिँचाइ समस्या कायमै
ओखरका लागि रुकुम पूर्व उपयुक्त ठाउँ भए पनि सिँचाइको भने अभाव रहेको छ । त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत सिँचाइ योजनाको कामलाई अगाडि सारेको डा. चौबेले बताउनुभयो ।
जिल्लामा ओखर जोन कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्षमा परीक्षणका लागि भारतको जम्मु काश्मिरबाट सात/आठ हजारको हाराहारीमा बिरुवा ल्याइएको थियो । परीक्षण सफल भएपछि गएको वर्ष टर्कीबाटै तीन हजार आठ सय बिरुवा ल्याइएकोमा यस वर्ष १९ हजार बिरुवा ल्याइएको हो । यस कार्यालयबाट मात्रै २९/३० हजारको हाराहारीमा दाँते ओखरको बिरुवा वितरण भइसकेको छ । रुकुम पूर्वमा किसानदेखि जनप्रतिनिधि र राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिले पनि दाँते ओखरको खेती गरिरहेका छन् ।